Vanyori vakazvimiririra I. Francisco Hergueta. 10 mibvunzo kumusiki waErnesto Sacromonte | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo: (c) El echo de Valdepeñas.
Chinyorwa chekutanga chevhiki ino chakatsaurirwa kuna vanyori vanozvimirira. Iwe unofanirwa kuvapa imwe diki nguva nenguva uye nhasi ndinounza Francisco Hergueta. Munyori we Solana (Ciudad Real), ine mabhuku maviri akazvitsvakira, bilogy ye nhoroondo dzezvakaitika inonakidza kwazvo nyeredzi Ernest Sacromonte, Pirate we zana ramakore XVI. Vakatumidzwa Ndinopika kuvimbika kwamuri y Ndinopika kutsiva nemusoro wenyaya we Nhoroondo yaErnesto Sacromonte.
Francisco Hergueta anozvizivisa uye anotipindura 10 mibvunzo nezve yako ruzivo munyika yekutsikisa, yayo mabhuku nevanyori vadikani, zvavo zvinokuvaraidza semunyori uye muverengi uye ramangwana ravo mapurojekiti uye fungidziro.
0.1 Francisco Hergueta ndiani?
0.2 Nhoroondo yaErnesto Sacromonte
0.2.1 Ndinopika kuvimbika kwamuri
0.2.2 Ndinopika kutsiva
1 10 mibvunzo
1.0.1 1. Unoyeuka here bhuku rekutanga rawakaverenga? Uye nyaya yekutanga iwe yawanyora?
1.0.2 2. Nderipi bhuku rekutanga rakakurova uye nei?
1.0.3 3. Ndiani munyori waunofarira? Iwe unogona kusarudza inopfuura imwe uye kubva kune ese eras.
1.0.4 4. Ndeupi munhu mubhuku raungadai uchida kusangana nekugadzira?
1.0.5 5. Chero zvivaraidzo kana zvasvika pakunyora kana kuverenga?
1.0.6 6. Uye nzvimbo yako yaunofarira uye nguva yekuzviita?
1.0.7 7. Ndeupi munyori kana bhuku rakakanganisa basa rako semunyori?
1.0.8 8.Mhando dzako dzaunofarira?
1.0.9 9. Chii chauri kuverenga izvozvi? Uye kunyora?
1.0.10 10. Iwe unofunga kuti chiitiko chekutsikisa ndechevanyori vakawanda sei varipo kana kuti vanoda kutsikisa?
1.0.10.1 Francisco Hergueta's blog
Francisco Hergueta ndiani?
Ini ndakazvarwa makore makumi matatu nematanhatu apfuura. Ini ndinogara muLa Solana (Ciudad Chaiyo), kwandinoshanda mubhizinesi remhuri yeiyo upholstery. Kunze kwekunyora ndinoda verenga, mafirimu uye akateedzanaNdiri chidiki chegeek na videogames. Asi ini ndakatengesa zvese izvo kuti tadpole iyo yava negore rimwe chete. Ndinoedza kuzvipa nguva yangu, asi… chii chandingati? Ini ndinoda sekondi yega yega yandinopedza naye, saka zvimwe zvese zvinotora chigaro chekumashure.
Kana zviri zvekunyora, zvakanaka ini ndakatanga mu Institute. Ipapo ndakazofarira kunyora fungidziro uye nyaya dzekusvirana. Ndakasangana nevanhu vane zvakafanana zvido mune izvo zvisina chokwadi nyika dze internet uye ndikaita shamwari dzakanaka dzakandibatsira kusvika pano. Ernesto Sacromonte uye mavambo ake ari kuunganidzwa kwezviitiko zvese izvi, kusanganisira kufamba famba Sevilla nemumwe wangu. Iye zvino ini ndinoedza kubatanidza mativi ese ehupenyu hwangu uye kutora nguva yekunyora.
Nhoroondo yaErnesto Sacromonte
Ndinopika kuvimbika kwamuri
Seville, 1524. Mushure mekununura muranda kubva mukubata kwaDuke Rodrigo de Alcoza anotyisa, Ernest Sacromonte, ane mukurumbira Spanish pirate, anoshandirwa nemutengesi weVenetian Carlo Colucci kukapteni chikepe chake chitsva: iyo "Doña Elena". Izvi zvichaburitsa kutsamwa kwemwanasikana waCarlo, Isabela, uyo achaedza nepese paanogona kuparadza Sacromonte.
Uye zvakare, iyo pirate ichafanirwa kutarisana nevateveri vemuchinda, Rodrigo de Alcoza, uyo achaedza nepese paanogona napo kupora Dana, muranda akabiwa, achinyudza vese pirate neshamwari dzake mukurangana kunokanganisa masimba epamusoro ehumambo. Senge izvo hazvina kukwana, murume asinganzwisisike akatumidzwa zita "Rufu”Kumuka kubva kumashure kweSacromonte, kuchema kutsiva.
Seville, Gumiguru 1524. Rodrigo de Alcoza Haazoregerera kunyadziswa kwakatambudzwa uye achaedza kuranga vavengi vake nenzira ine hutsinye uye isina tsitsi. Panguva iyoyo, uye mune cahoots neInquisitor General Louis weBesuan, acharonga kurwisa kwekupedzisira pachigaro che Carlos Ini. Muchinda haatenderi vapambi kuti vapinde munzira yekuchiva kwake uye achavapwanya asingazeze.
Ko Sacromonte ingatarisana nezvikara zvakadaro uye ichidzivirira yake? Yake yega sarudzo ichave yekusarudza yakatukwa uye yakasurukirwa nzira, kuramba hunhu hwake uye kutarisana iye amene; Zvese zvawakatenda mazviri Anofanirwa kufamba munzvimbo dzakasviba dzemweya wake uku kutsiva kuchimudya. Ichave nzira yekusadzoka? Achakwanisa kuchengetedza mhuri yake kuchengetedzeka here, kana iwo mutengo wekubhadhara wekumira kune vane simba uchanyanya kwazvo? Kuti akunde, anofanirwa kuve zvaanovenga zvakanyanya. Nekuti chete dhimoni rinogona kukunda rimwe dhimoni.
Mabhuku ekutanga andinorangarira ndichiverenga aive ngano. Amai vangu vanga vari nhengo yeCírculo de Lectores kwemakore mazhinji uye vakakumbira ini nehama dzangu kuunganidzwa uku tichiri vadiki. Nguruve nhatu, Blancanieves, Akashinga mudiki musoni, Rapunzel... Ndakanga ndisina chandinofarira, asi Dumbo Handina kuzvifarira zvachose. Kana iri nyaya yekutanga yandakanyora ndinofunga yaive yekugadzira-kuenderera kwebhuku randakaverenga muBUP rekare.
Bhuku rekutanga rakandifadza chaizvo raive Kereke huru yegungwa. Dzimwe dzakapfuura dzaigona kuita seni, kana kuti dzaigona kundibata pane imwe nguva munhoroondo, asi iyi kunyanya yakandinyumwira pachirongwa chose.
Imwe nyaya ndeye ya comic, chaizvo Iyo Kuuraya Joke. Inorondedzera kwakatangira kwaJoker uye kuti anonangana sei naBatman. Kunyangwe ini ndisingakwanise kutaura nezve kukanganisa, kwaive kuwanikwa chaiko. Ini ndanga ndaverenga mamwe ma comics echiSpanish, kunyanya kubva Mortadelo uye Filemon uye vanosekesa Sacarino mabhatani, asi uyu kunyanya aive nehutsinye. Iwe unogona kupedza akawanda maminitsi uchizvidzivirira iwe mune yega vignette. Zvinoshamisa.
Handina munyori wandinodisisa. Ini ndiri anopfuura mhando, kunyangwe ndichifanira kubvuma kuti ndakaverenga mabhuku maviri e Agustin Sanchez Vidal (Shandira kune chero munhu y Tenzi kiyi) uye ndinoda manyorerwo aanonyora. Dai ndaifanira kugara nemunyori, angave iye. Ini ndinofunga kuti mune zvinyorwa iwe unokwezva kune imwe kana akawanda marudzi, asi zvakanyanya kuomera kuti munyori azadze iwe, kunyanya kana achitamba akawanda masitaera.
Gadzira ku Harry Potter. Zvino zvakanyanya, ndingadai ndakada kusangana vaviri: Don Quixote, yekutaura naye uye nekuziva kwekutanga-ruoko iyo hunhu musanganiswa wekupenga, hushingi uye chivalry, uye nekumubvunza kuti ndeipi nzvimbo iri muLa Mancha ane zita rekuti Cervantes haadi kurangarira. Humwe hunhu ndihwo JustineneMarquis de Sade.
Hapana kunyanya kuverenga, asi kunyora ndinofanira kuva nechimwe chinhu mupfungwa: hood, mahedhifoni... ndinofungidzira ndakaibata ndichiedza kugadzira runyararo uye kubvira ipapo ini ndoda chimwe chinhu. Mania haina kukurudzirwa zvakanyanya muzhizha, asi inoshamisa munguva yechando.
Kuzvishandira uye baba vatsva. Zvisinei nezve iyo nguva, chinhu chakakosha kuiwana. Ndinogara ndichinyora mumba mangu. Iko kune anarchic order iyo hapana mumwe kunze kwangu anonzwisisa uye iyo yandinowana ichinyaradza.
Kupfuura munyori kana bhuku, genre. Nhoroondo. Iwo ndiwo enganonyorwa andinonyanya kufarira, kunyange hazvo isiri iyo yandakanyora zvakanyanya. Pasina kuzviziva, ivo vakasiya yakanaka ficha yezviitiko zveErnesto Sacromonte.
Nhoroondo, zvishuwo uye zvinonakidza. Nenzira iyi. Kunyora zvakangopesana.
Ndiri kuverenga Lolita uye ndiri kunyora zvishoma nezvishoma bhuku rangu rinotevera. Ndiyo erotic novel, yazvino uye vane mavara avo vanozove neakasimba zano
Phew, zvakaipa. Panorama mal. Kune vanyori vazhinji, vazhinji kwazvo. Uye zvechokwadi, kana paine akawanda, pane zvakanaka nezvakaipa. Iwo akachena manhamba. Iyo kuzvishambadza Izvo zvinoburitswa nemazana evanyori vanoona zvisingaiti kushambadzira nevashambadzi vane mwero zvakanyanya uye zvakare iri dziva umo vaparidzi vane mwero vanoona kuti ndeupi munyori ane tarenda (kureva kuti, anogona kutengesa yakawanda) kuti abudise. Muchidimbu: panorama yakamisikidzwa uye kunyangwe paine mabwe anokosha pakati pevanyori vanozvitsikisa, kune huswa hwakawanda uye zvinonetsa kuzviwana. Vaparidzi vakuru havadi kuisa panjodzi, chingogara pasi wo mira uone kuti ndeapi maodhaidhi anoiswa pasocial network.
Francisco Hergueta's blog
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Vanyori vakazvimiririra I. Francisco Hergueta. 10 mibvunzo kumusiki waErnesto Sacromonte